Rivaldo oo kula taliyay Barcelona inay ka fogaato Lautaro Martínez, xilli uu tilmaamay xiddiga ay haboon tahay inay la soo wareegaan - Hargeele - Wararka Somali State
March 27, 2020 84
(Barcelona) 27 Mar 2020. Halyeeyga reer Brazil ee Rivaldo ayaa kula taliyay maamulka kooxda kubadda cagta Barcelona inaysan la soo saxiixan Lautaro Martínez xagaaga soo aadan.
Rivaldo oo horey u soo xirtay maaliyada kooxda Barcelona ayaa u sheegay in Barca ay la soo wareegto xiddiga Paris Saint-Germain ee Neymar Jr.
Labadan xiddig ayaa lala xiriirinayaa inay u dhaqaaqayaan Barcelona xilli ciyaareedka cusub, maadaama ay kooxda reer Catalonia dooneyso inay dib u dhisto safka kooxdeeda.
Haddaba wargeyska “Sport” ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Rivaldo waxaana uu yiri:
“Lautaro Martínez ma ahan xalka xilligan, Neymar aragtideyda waa inuu noqdaa mudnaanta koowaad ee lagu xoojinayo weerarka kooxda Barcelona”.
“Lautaro Martínez waa 22 jir wuxuuna u baahan yahay horumar, waa inuu helaa qibrad, si uu yeesho qaab ciyaareed heer sare ah, si uu mustaqbalka u noqdo xiddig cajiib ah”.
“Sababahan dartood, waxaan u maleynayaa in Barcelona ay u baahan tahay inay diirada saarto qorshihii ay ku soo celin laheyd Neymar Jr”.
“Barcelona waa in ay sameysaa dadaal weyn si ay u soo celiso Neymar, hadda waxa ay u muuqataa in Paris Saint-Germain ay diyaar u tahay wada xaajood”.
“Neymar waa 28 jir, walina wuxuu hayaa wax badan uu soo bandhigo, Isbadel ayuu ka sameyn doonaa Barcelona madaama uu runtii yaqaano kooxda iyo kubadda cagta Spain.”
“Wuxuu sidoo kale leeyahay shaqsiyad sax ah, waxaana uu isbadel weyn ku sameyn karaa ka garab ciyaarista Lionel Messi.”
“Waan hubaa inuu Lionel Messi uu doonayo in markale uu ka garab ciyaaro Neymar Jr”.
Child Protection Coordinator – Area of Responsibility, P3, TA (6 months), for Non-Ethiopian nationals
Maraykanka oo Soomaaliya ugu hambalyeeyay heerka ay ka gaartay arrimaha deyn cafinta
Daafacii ugu adkaa uu ka hor yimid, kulankii ugu muhiimsanaa ee xirfadiisa, abaal-marinta Ballon d’Or & dhowr arrimood uu ka hadlay Benzema
Kooxda Manchester United oo kalsooni ku qabta inay bishaan dhammaystirayso saxiixa Bruno Fernandes… (Meeqa Milyan ayay ku soo qaadanaysaa?)